အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နည်းဗျူဟာကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 6, 2015 အင်္ဂါနေ့, မေလ 5, 2015 မိုက်ကယ်ရှီးယား
သင်ဘယ်လိုအောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နည်းဗျူဟာဖြန့်ချထားသလဲ များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်၊ ဤမေးခွန်းသည်ဒေါ်လာသန်း (သို့မဟုတ်ထိုထက်မက) မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့မေးရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နည်းဗျူဟာ?
ဒါဟာaနဲ့စတင်သည် ရည်မှန်းချက် သို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထား၏။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်အောင်မြင်စွာသုံးစွဲခြင်းကိုရှင်းလင်းစွာတိုင်းတာရန်ကူညီသည့်အဓိကပန်းတိုင်အချို့ရှိပါသည်။ သူတို့ပါဝင်သည်:
အောင်မြင်သော Marketing Automation မဟာဗျူဟာရလဒ် တိုးပွားလာ အတွင်း:
အောင်မြင်သော Marketing Automation မဟာဗျူဟာရလဒ် လြော့ပေါ့စေ အတွင်း:
သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Automation မဟာဗျူဟာ Defining
ငါဖြန့်ဖြူးကူညီပေးခဲ့ 20+ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၏သာဓကများနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးသောဘုံ၌အဘယ်သို့သောအရာကိုစဉ်းစားမိတယ်။ ငါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဗျူဟာအားလုံးနှင့်ထပ်တူတူညီမှုနှစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိရောက်သောခဲစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်များ.
ထိရောက်သောခဲစီမံခန့်ခွဲမှု စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၏ကျယ်ပြန့်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်စေရန်အထောက်အကူပြုမည့်အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှု၏အဓိကကဏ္inများကိုကျွန်ုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ စတင်ရန်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် ဦး ဆောင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပိုကောင်းတာက၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်များအကြား ဦး ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါ။ ဦး ဆောင်ပါဝင်သောအဓိကလူ ဦး ရေဆိုင်ရာ / အတိအကျသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးများကဘာတွေလဲ။
သင့်ရဲ့ ဦး ဆောင်အဆင့်ဆင့်တည်ထောင်ခြင်း နောက်တစ်ခု ၎င်းသည် MQL, SAL, SQL စသည်ဖြင့်ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကဲ့သို့ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ သို့မဟုတ်ပါကကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ ၀ ယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထူးခြားသောအဆင့်များကိုပိုမိုတိကျစွာခွဲခြားနိုင်သည့်စိတ်ကြိုက် ဦး ဆောင်အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ပြီးနောက် ဦး တည်ချက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသင်လက်ရှိအဆင့်တစ်ခုစီအား ဦး ဆောင်အဆင့်တစ်ခုစီတွင်မြေပုံဆွဲလိုသည်။ ၎င်းသည်ခဲ၏ပစ္စုပ္ပန်အဆင့်ပေါ် မူတည်၍ ခဲပြုစုပျိုးထောင်မှုကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်။ အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်ကစားသို့ရောက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ အရောင်းသတင်း၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင်မျှဝေရန်အလွန်ကောင်းသည့်အကြောင်းအရာရှိခြင်းအားဖြင့်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ စာကြည့်တိုက်ကောင်းကောင်းမပါရင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝေမျှဖို့မလိုပါဘူး။
သင်၏ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးခြင်း
ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆီသို့ပြန်သွားခြင်း၊ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအစီအစဉ်များကိုအကြမ်းဖျင်းဖော်ပြခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအလိုအလျောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခဲ / ဦး ဆောင်အဆင့်ကိုသတ်မှတ်ရန်ခြေလှမ်းများသည်ဤနေရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ထိုကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းသင်၏ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်များသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖြစ်စေ၊
ခဲပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်၊ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလမ်းကြောင်းများတည်ဆောက်ရန်၊ လိုအပ်သောအစပျိုးမှုများကိုသတ်မှတ်ရန်၊ အကြောင်းအရာကွာဟချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတာ ၀ န်များကိုညှိနှိုင်းရန်သင်၏ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုအဆင့်ဆင့်ဇယားကွက်တစ်ခုဖန်တီးရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သက်ဆိုင်သူများ (ဥပမာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ) နှင့်ဤစီးဆင်းမှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်ထိရောက်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုသင်စုစည်းနိုင်ပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပconflictsိပက္ခများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးလိုအပ်သောတာ ၀ န်များကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။
သင်ကြားပို့ချမှုများကိုထိရောက်စွာပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန်အတွက်သင့်တော်သောအကြောင်းအရာများကိုသင့်တော်သောအချိန်တွင်ပေးပို့နိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ခိုင်မာသောအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်ရှိခြင်းနှင့်၎င်းကို ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်ပုံဖော်ခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ရှိခြင်းသည်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ခြင်းသည် ဦး ဆောင်မှု၏တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအလိုအလျောက်မီးကျစေမည့်စမတ်စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းများဖန်တီးခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။
သင် ဦး ဆောင်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု + လှုပ်ရှားမှုအစုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်ဆိုင်ရာ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဖန်တီးနိုင်လေလေ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နှင့်သင်ပိုမိုအောင်မြင်လေလေဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောအာရုံစိုက်ခဲပျိုးထောင်မှုသည်အနိမ့်ဆုံး (ရှိခဲ့လျှင်) အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ မြင့်မားသောဒေတာဘေ့စ်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသောပစ်မှတ်ထားထားသော ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးရှိသော၊ သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာသည်သင်၏ ဦး ဆောင်မှုများအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးပေးပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင်မူလသတ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်အတွက်ရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို ဦး ဆောင်ခြင်း
နှင့် Net-ရလဒ်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောအဆင့်မြင့်ဒေတာဘေ့စ်အပိုင်းအစများနှင့်စီးပွားရေးတွင် ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့်ကိရိယာများရှိခြင်းအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူသည်။ သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်မြင့်မားသောပစ်မှတ်ထားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးအတွက်စံအသစ်ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်သမားများအတွက် Net-Results နှင့်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ segmentation လုပ်ဆောင်ချက်သည် Net-Results ၏အဓိကဖြစ်ပြီးခဲသွင်းမှု၊ လက်ငင်းသတိပေးချက်များ၊ အစီရင်ခံခြင်းနှင့်အခြားအရေးကြီးသောအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်သင်၏ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။
သင်သည်မည်သည့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်နက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစည်းမျဉ်းများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ လှုပ်ရှားမှုရှိဌာနခွဲတစ်ခုစီသည်တူညီသောအစွမ်းထက်သည့် segmentation engine ဖြင့်စွမ်းအားရှိသည်။ ရာနှင့်ချီသောအစိတ်အပိုင်းပေါင်းစပ်မှုများသည်ပညာရေးနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုများကိုအသိဥာဏ်နှင့်အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
Tags: ဆုံးရှုံးခဲ့ရရောင်းအားလျော့နည်းစေသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး overhead လျှော့ချရောင်းအားသံသရာလျော့နည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဦး ဆောင်လမ်းပြဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်မဟာဗျူဟာ ဦး ဆောင်လမ်းပြစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် segmentစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်မဟာဗျူဟာအရည်အချင်းပြည့်မှီသောဆောင်အရောင်းအခွင့်အလမ်းများရောင်းအားကုန်ထုတ်စွမ်းအား
မိုက်ကယ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာဖြစ်သည် Net-ရလဒ်များ။ Michael သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော၊ မဟာဗျူဟာနှင့်ဆန်းသစ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ပုံစံများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ တီထွင်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းရည်မှန်းချက်များကိုအထောက်အပံ့ပေးရာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်မြင့်တက်လာစေရန်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။
စက်တင်ဘာ 4, 2015 မှာ 7: 56 AM
မင်းရဲ့ဆောင်းပါး Michael ထဲမှာစီးဆင်းမှုဇယားကွက်ဖော်ပြထားတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီအရာတွေရှုပ်ထွေးလာနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့်သင်တည်ဆောက်နေသော lembut ၏ကိုယ်စားပြုမှုမရှိသော Hubspot ကဲ့သို့သော tool ကိုအသုံးပြုနေပါက။
29:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 13 မှာ
ဦး ဆောင်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု + လှုပ်ရှားမှုအစုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဖန်တီးနိုင်လေလေ၊ ဒီကိုချစ်ပြီးပိုပြီးသဘောတူနိုင်ဘူး။
ပို၍ ဦး စားပေးပြုစုပျိုးထောင်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်“ Lead Activity” နှင့်“ Activity Sets” ကိုသင်မည်ကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့ ်၍ မည်သို့အသုံးချသည်ကိုကြားလို။ Mike ။
21:2018 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 34
20:2021 pm မှာဇွန် 6, 04